तपाईंको मोबाइल उपकरणहरूमा VPN प्रयोग गर्न7कारणहरू ग्याजेट समाचार
Reasons कारणहरू तपाईंको मोबाइल उपकरणहरूमा एक VPN प्रयोग गर्न
राफा रोड्रिगिज ब्यालेस्टेरोस | | समीक्षा
आज हामी कुरा गर्छौं सबै भन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको साथ VPN सर्भर मध्ये एक त्यो हामीलाई एक प्रस्ताव गर्न आउँछ वास्तवमै सुरक्षित प्रयोगकर्ता अनुभव, NordVPN। हामीले गल्तिले भरिएको देख्यौं, घरबाट नयाँ युगको आगमन। र राम्रो VPN सेवा हुनु आवश्यक भएको छ।
दुर्भाग्यवश, घर नेटवर्कबाट संवेदनशील डाटा यातायात मा ठूलो वृद्धि पनि मतलब छ सुरक्षा आक्रमणमा घाता .्कीय वृद्धि। हामीले काम गर्नका लागि डेटा ह्यान्डल गर्ने सेफगार्डिंग, घरबाट पनि, सर्वोपरि महत्वको भएको छ। Y NordVPN एक आदर्श समाधान बन्छ समस्याबाट बच्न।
1 VPN सेवा प्रयोग गर्न किन यो सुविधाजनक छ?
2 NordVPN हामीलाई सुरक्षा चाहिन्छ
3 एक अविश्वसनीय सर्भर नेटवर्क
3.1 मानक सर्भर र समर्पित सर्भरहरू
4 NordVPN गति र सुरक्षाको पर्यायवाची हो
5 NordVPN सेवाको लागत कति छ?
VPN सेवा प्रयोग गर्न किन यो सुविधाजनक छ?
हामी तपाईंलाई दिन गइरहेका छौं VPN प्रयोग गर्नको लागि reasons कारणहरू काममा तपाईंको इन्टरनेट जडानको लागि, वा तपाईंको गृह नेटवर्कको लागि। हामीलाई सुरक्षा हमला वा चुहिनबाट जोगाउन सुरक्षित र सक्षम रहेको जडानको भिन्नताले यस भिन्नतालाई आज फरक पार्छ।
सुरक्षा: कुनै श doubt्का बिना यो छ मुख्य कारण किन कुनै पनि इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले VPN कम्पनीको सेवाहरू भाँडा लिन आवश्यक महसुस गर्न सक्दछ। तपाईले काम गर्ने डाटाको संवेदनशीलता, वा शान्तपूर्वक निदाउने र सम्भावित सुरक्षा भंगबाट नडराउने साधारण तथ्यले यी सेवाहरूलाई बढी र अधिक मूल्यवान बनाउँदछ।
गोपनीयता: यस प्रकारको सेवाहरूको गोपनीयता जान्छ सुरक्षा संग हात मा। हामी भन्न सक्दछौं कि हाम्रो नेटवर्क को उपयोगको गोपनीयता, यसको प्रयोगकर्ताहरूको, साथै डाटा यो चालमा जान्छ, अधिकतम ग्यारेन्टीको साथ व्यवहार गर्नु पर्छ तेस्रो पक्षको बिरूद्ध गोपनीयताको।
गति: जब हामी VPN सर्भर प्रयोग गर्न निर्णय गर्छौं जसले हामीलाई प्रस्ताव गर्दछ सुरक्षाको एक उच्च स्तर, यो केवल महत्त्वपूर्ण कुरा हुनु हुँदैन। केहि अवसरहरूमा, सर्भरले प्रस्ताव गरेको सुरक्षा वेगको साथ विरक्त हुन्छ जुन यो प्रस्ताव गर्न सक्षम छ। एक सुरक्षित तर ढिलो कनेक्शन राम्रो कनेक्शन छैन.
जडान स्थिरता: समान रूपमा, गति जस्तै, एक स्थिरता कनेक्शन प्रदान गर्न सक्षम छ कि आवश्यक छ। सुरक्षाको उच्च स्तरको जडानहरू हुनु बेकार छ, तर यसको लागि हामीले निरन्तर सेवा आउटसेजबाट जानुपर्दछ।
विशेष VPN सर्भरहरू: मुख्य स्तम्भहरू मध्ये एकमा जडान सेवा समर्थित हुनुपर्दछ VPN एक इष्टतम सेवा प्रस्ताव गर्न को लागी हो सर्भरहरूको एक राम्रो सेट। मा गणना गर्दै हरेक आवश्यकताको लागि बिभिन्न सर्भरहरू, समर्पित सर्भरहरू, डबल सर्भरहरू, र्याम सर्भरहरू र P2P सर्भरहरू पनि, प्रयोगकर्ता अनुभव यसको सबै प्रयोगकर्ताहरूको लागि सकरात्मक हुनेछ।
इष्टतम डेटा यातायात: इन्टरनेट ब्राउज गर्दा VPN जडानको लागि गति महत्त्वपूर्ण हुनुको साथै। पनि हामीले डाटा अपलोड गर्न र डाउनलोड गर्न नेटवर्कको क्षमतालाई ध्यानमा राख्नु पर्छ। आदर्श रूपमा, सेवा सुरक्षा र राम्रो एमबीपीएस स्ट्रिम संख्या दुबै तरीका, अपस्ट्रीम वा डाउनस्ट्रीम।
मूल्य: हामी सधैं भन्छौं कि जब हामी उत्तम सेवा प्रदान गर्ने सेवा खोज्छौं, मूल्य सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षहरू बीच हुनुहुँदैन। तर यो अपरिहार्य छजब हामीले भाडामा लिने निर्णय गरे, कम्पनीहरू बीच मूल्य तुलना गर्नुहोस्। के निश्चित छ र असफल हुँदैन भन्ने हो कि नि: शुल्क सेवा सशुल्कको उचाइमा कहिल्यै हुँदैन।
NordVPN हामीलाई सुरक्षा चाहिन्छ
एक्रोनिम VPN धेरै को लागी पहिल्यै परिचित छ, अझै उपयोगकर्ताहरु छन् जो हामी के कुरा गर्दैछौं भनेर सोच्न सक्छ। यसका लागि यो जान्नु महत्त्वपूर्ण छ VPN अंग्रेजीमा एक्रोनिमको शाब्दिक अर्थमा आउँदछ भर्चुअल निजी नेटवर्क। छोटकरीमा, यो एक हो जडान that, एक माध्यम को रूपमा एक सार्वजनिक नेटवर्क को उपयोग गर्दै इन्टरनेट जस्तै, तपाईंलाई एक निजी नेटवर्कमा कम्प्युटरहरू जडान गर्न अनुमति दिन्छ सुरक्षित रूपमा
बजारमा हामी फेला पार्न सक्छौं सुरक्षा अनगिन्ती VPN सेवाहरू, गति र विदारक। र हामीले केहि कम्पनिहरु भेट्यौं जुन सित्तैमा यी सेवाहरु प्रदान गर्दछ। यद्यपि, लगभग सबै क्षेत्रहरूमा जस्तै, अनुभव अन्ततः के हो जसले हामीलाई एक वा अन्य सेवाहरूमा विश्वास गराउँदछ। के तिनीहरू सँधै आफ्ना प्रतिज्ञाहरू हुन्?
नयाँ आवश्यकताहरूको सामना गर्नुपर्दा, नयाँ प्रस्तावहरू सधैं उठ्छन्। आज ACTualidad Gadget बाट, NordVPN ले प्रदान गर्ने सेवाहरूको विश्लेषण पछि, हामी तपाईंलाई यो भन्न सक्दछौं कि यो प्रस्ताव गर्न सक्षम छ। हामी तपाईंलाई प्रस्तावहरूको बारेमा पनि बताउँदछौं जुन यो सेवा अझ रमाइलो भएको छ। यदि तपाईंको व्यावसायिक नेटवर्क को सुरक्षा महत्वपूर्ण छ र तपाईं अधिकतम ग्यारेन्टीहरू पाउन चाहनुहुन्छ, यसका साथै नेटवर्क क्षमताहरू घट्दो देखिएको छैन, NordVPN तपाईले खोज्नु भएको कुरा मात्र हुन सक्छ.
यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र NordVPN सीमित-समय प्रस्ताव %२% मा छुट पाउनुहोस् र months महिनाको उपहारको साथ मात्र € २. only। प्रति महिना।
एक अविश्वसनीय सर्भर नेटवर्क
जब एक सेवा यस्तो राम्रो समीक्षा प्राप्त गर्दछ, यो संयोग द्वारा कहिल्यै हुँदैन। अन्तमा, प्रयोगकर्ताको अनुभव भनेको कम्पनीको उत्तम सम्पत्ति हो जब यो बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आउँदछ कम्पनीहरु को समान प्रस्ताव संग। NordVPN द्वारा प्रदान गरिएको सेवा सर्भरहरूको पूर्ण नेटवर्कको परिणाम हो एक स्थिर र १००% सुरक्षित जडान प्रस्ताव गर्न सक्षम।
NordVPN छ यसको प्रयोगकर्ताहरूको सेवा सर्वरहरूको एक उत्तम सूची। यसको लागि धन्यबाद, यसले विश्वको लगभग कहिँ पनि कभरेज प्रदान गर्दछ। A विश्वसनीय जडान जुन तपाईंको प्रतिस्पर्धाको एक चरण अगाडि छ। यसको एल्गोरिथ्म सर्वर चयन गर्न सक्षम छ जुन तपाईंलाई उपयुक्त स्थानका अनुसार उत्तम सूट गर्दछ। यो व्यर्थ हुँदैन 5.500०० भन्दा बढी सर्भरहरू संसारभरि फैलियो.
एउटा तथ्य जसले पूर्ण सुरक्षित सेवा चाहिन्छ तिनीहरूका लागि प्लस प्रस्ताव गर्दछ NordVPN का धेरै सर्भरहरू र्याम मात्र हुन्, त्यसैले तिनीहरूसँग डाटा भण्डारण क्षमता छैन। यसले पूर्ण सुरक्षित अपरेसन सुनिश्चित गर्दछ र जहाँसुकै भए पनि प्रभावकारी.
मानक सर्भर र समर्पित सर्भरहरू
सर्भरहरूको यस्तो पूर्ण नेटवर्कमा हामी फेला पार्दछौं आवश्यकताको आधारमा उत्तम सेवा प्रस्ताव गर्नको लागि केवल समर्पित सर्भरहरू प्रत्येक प्रयोगकर्ता को। त्यसैले हामी भेट्छौं समर्पित आईपी सर्भरहरू समर्पित आईपी ठेगानाको साथ प्रयोगकर्ताहरूको लागि। उही तरीकाले, NordVPN पनि छ डबल VPN सर्भरहरू, प्रयोगकर्ताहरूका लागि जो दुई फरक सर्भरको फिल्टरमा तिनीहरूको जडान पठाउन इच्छा गर्दछ।
हामीले पनि भेट्यौं प्रतिबन्धित ईन्टरनेट पहुँच भएका देशहरूका लागि विशेष सर्भरहरू। TP चलाउन VPN सर्भरहरू, P2P सर्भरहरू बेंच चौड़ाईमा सीमा बिना विशेष अनुकूलित। सेवाहरू जुन हामी तिनीहरू कुन देशमा प्रयोग गर्न चाहन्छौं भन्नेमा निर्भर छन्।
NordVPN गति र सुरक्षाको पर्यायवाची हो
हामी यो पुष्टि गर्न सक्छौं NordVPN द्वारा प्रस्ताव गरिएको कनेक्शन सेवा विश्वको सब भन्दा छिटो हो। धन्यवाद एक प्रोप्राइटरी प्रोटोकल NordLynx भनिन्छसमावेश गर्दै WireGuard को एक पंजीकृत संस्करण। जहिले पनि स्थिर जडानको अनुभव जुन हाम्रो डेटा सँधै सुरक्षित रहन्छ त्यस्तो चीज हो जुन सबैले प्रस्ताव गर्न सक्दैनन्।
En परीक्षणहरू संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र जर्मनीमा सर्वरमा प्रदर्शन गरियो वास्तवमा राम्रो डाटा दुबै माथि र डाउनहिल प्राप्त गरियो। यसैले, भित्र संयुक्त राज्य अमेरिका, गति १1,300०० एमबीपीएस भन्दा बढि छ दुबै अपलोड र डाउनलोड गर्नेमा। खुल्ला युनाइटेड किंग्डम, वंश तल छ १०० एमबीपीएस माथि, र १,१०० एमबीपीएस भन्दा बढि अपलोड गति। जर्मन सर्भरहरूदुबै गति १,१०० एमबीपीएस भन्दा बढि छ.
NordVPN सेवाको लागत कति छ?
हामीलाई थाहा छ, सस्तो सेवा जहिले पनि राम्रोसँग पर्यायवाची हुँदैन। जब हाम्रो नेटवर्क सुरक्षा खतरामा छ, हामीले या त स्किप गर्नु हुँदैन। हामी अविश्वसनीय VPN सम्झौताहरू पाउन सक्छौं जुन पछि भ broken्ग हुन्छन्। त्यसो भए विशेष गरी यस्तो प्रीमियम सेवामा यस क्यालिबरको प्रस्ताव पाउन रोचक हुन्छ.
वर्तमान पदोन्नति को लागी धन्यवाद हामी भर पर्न सक्छौं ग्रहमा सब भन्दा छिटो VPN प्रति महिना केवल € २.2,64। को लागि। २ बर्ष योजनाको साथ saving२% को कुल बचत संग यसको सामान्य मूल्य भन्दा माथि र उपहारको additional अतिरिक्त महिना यस पदोन्नतीको फाइदा लिई हामी एउटा सेवाको लागि € .१.२० तिर्नेछौं जसको मूल्य २€3.१२ छ। यदि तपाईं एक प्रमाणित VPN सेवा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो जुन सुरक्षा र गति प्रदान गर्दछ, यो अविश्वसनीय अवसर नभुल्नुहोस्।
त्यसैले तपाइँको अनलाइन सुरक्षा र गोपनीयता बेवास्ता नगर्नुहोस्: यहाँ क्लिक गर्नुहोस् र सीमित-समय प्रस्ताव प्राप्त गर्नुहोस्: NordVPN %२% छुट छ र months महिना नि: शुल्क मात्र month २.72€ प्रति महिना।
लेखको पूर्ण मार्ग: ग्याजेट समाचार » सामान्य » समीक्षा » Reasons कारणहरू तपाईंको मोबाइल उपकरणहरूमा एक VPN प्रयोग गर्न
पेशेवर ब्रशिंगको लागि यी अविश्वसनीय सौदाहरूको फाइदा लिनुहोस् ओकलियन उत्पादनहरूमा
मेरो भ्याकुम क्लीनर G9, विश्लेषण, प्रदर्शन र मूल्य